Home Wararka RW Itoobiya oo dhambaal u diray shacabka Yamen
RW Itoobiya oo dhambaal u diray shacabka Yamen
Ra’iisal Wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa baaq ka soo saaray colaada dabada dheeraatay ee ka taagan dalka Yeman. Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya ayaa ugu baaqay dhinacyada isku haya dalka Yeman inay dib u soo celiyaan nabad galyada iyo deganaanshihii dalkaasi iyaga oo isticmaalaya wadda hadal ay yeeshaan.
Warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska Ra’iisal Wasaare Dr. Abiy Ahmed ayaa lagu sheegay “ Idinka oo isticmaalaya sabab wada fadhiista miiska oo wada hadla, falanqayna ku sameeya maxaa ugu wanaagsan,waydun heshiin ama waydun heshiin waayi idinla oo aan dhiig daadinayn oo aan dagaalamayn dadkuna guryahooda joogaan.”
Previous articleSOMALIS Join Big Four Tribes, Muslims Are More than Kalenjins, Joho got numbers than Ruto
Next articlePuntland oo daandaansi ku tilmaantay safarkii wasiirada Somaliand ee gobolka Sool (Daawo)
Hirshabeelle oo shaacisay xilliga la dooranayo xildhibaannadii ugu horeeyay
Dagaallo dib uga bilowday Waqooyiga Itoobiya
Dr. Beyle oo Beentiisii Joogtada Ahayd run ka Sheegay Ugu Dambeynta! Akhriso
Burundi oo diiday in Ciidankeeda lagasoo saaro Soomaaliya
Wefdi heer caalami ah oo ka socda Beesha Caalamka oo Kismaayo...